एउटा गल्ति छोप्न नेजाद्वारा अर्को गल्ति : फाटेको टालोले अमेरिका रहेका नेपाली पत्रकारको छोपिएला लाज ?
बिष्णु हरि घिमिरे ।
अमेरिका । कभर फोटोमा देखिएका बील र हरहिसावका खेस्रा नेपालमा बर्षौ अगाडि कुनै स्कूलका विद्यार्थीले सरस्वति पूजा गर्दाको भने होइन । नत यो कुनै गाँउको आमा समुहको हो । यो प्रविधिकै उच्चतम प्रयोग गर्ने अमेरिकामा बस्ने नेपाली पत्रकारहरुको संस्थाको हो ।
अमेरिकामा नेपाली पत्रकारका दुई वटा संस्था क्रियाशिल छन् । त्यसमा नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजा पुरानो हो ।
राज्यसत्ता र समाजलाई सदैव खवरदारि गर्ने पत्रकारहरुले अमेरिकामा आफ्नै संस्था कुन हालतमा चलाएका छन् भन्ने यी बीलहरु सानो उदाहरण मात्र हुन ।
जब संविधान,विधान,ऐन,कानुन,नियमहरु मिचिन्छन अनि त्यहाँ समाचार बन्छन् । अरुका बारेमा रौ रौ केलाउने पत्रकारहरुको संस्थालाई संस्थागत रुपमा नचलाइएको मात्र होइन पटक पटक विधान कुल्चने गरिएको छ ।
अहिलेको स्मार्ट युगमा त्यो पनि अमेरिका आफैले नगद उदारो बील बनाएर हिसाव मिलाएको देखाउनु, कागजको टुक्रामा टिपोट गरेर त्यसैलाई बील भनेर सदर गर्नु आफैमा हास्यस्पद र गैर जिम्मेवार कुरा हुन् । अमेरिकाका हरेक स्टोरमा प्रिन्टेड बिल हुन्छ ।
नेजाको आर्थिक नियमावलीले पाँच सय अमेरिकी डलर भन्दा बढी नगद कारोवार गर्न रोकेको छ । तर कागजी टुक्रामा टिपोट गरेको आधारमा सयौं डलर नगद भुक्तानी गरिएको छ । त्यति मात्र होइन विधानले बार्षिक आर्थिक प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर सन् २०२१ को जुलाईमा भर्जिनियामा तत्कालिन कोषाध्यक्ष मच्छेदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन अहिले सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसो त सदस्य समेतलाई पूर्णरिपोर्ट दिइएको छैन ।
विधानको पालना गर्नु हरेक पदाधिकारीको दायित्व र कर्तव्य हो । यो कसैले भन्नै पर्ने होइन । तर नेजाकै सदस्य समेत रहेको यस पंक्तिकारले विधानको धारा स्मरण गराउदै विगत ६ महिनाको अर्न्तरालमा तीन तीन पटक लिखित माग गरे पछि उपलब्ध गराइएको अधुरो हिसाव हो यो ।
नेजाको विधानले साधरण सदस्यले मागेको खण्डमा कुनै पनि बेला पूर्ण आर्थिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पर्ने भनेको छ । तर संस्थाको एक पेनी पनि हिनामिना गरेको छैन भन्ने नेजाको वर्तमान नेतृत्व विगत तीन बर्ष देखिको हरहिसाव देखाउनै मञ्जुर देखिदैन ।
सन् २०१७ मा संसोधित विधानमा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको हो । अरुलाई पारदर्शिताका बारेमा ‌औला उठाउनु अगाडि पत्रकारहरु आफै पारदर्शि हुनु पर्छ भन्दै पब्लिक अडिटको व्यवस्था राखिएको हो । जसमा आम्दानी र खर्चको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने अवधारणा हो । अर्को पाटो पत्रकारका संस्थाले लिने चन्दा पारदर्शि हुनु पर्छ गोप्यरुपमा चन्दा लिन हुदैन भन्ने मान्यता पनि स्थापित गर्न खोजिएको हो ।
मुख्य रुपमा नेपालमा भुकम्प जाँदा र बाढी पहिरोको समयमा विभिन्न संस्थाहरुले उठाएका चन्दाको आम्दानी र खर्चको बारेमा पछि ठूला विवाद भएका थिए । केही स्थापित संस्थामा आर्थिक अपारदर्शिताको आरोपमा पदाधिकारीले एकले अर्कोलाई कारवाही गरेको ठूलै समाचार भएका थिए ।
आम्दानी नै लुकाउने समस्या नेजामा नै पटक पटक देखिएको थियो । वर्षको एक पटक त्यो पनि कापिको पानामा टिपोट गरेर हिसाव देखाउने र त्यस्तो समयमा आम्दानी नै छुटाउने गरिएको घटना दोहोरिए पछि दाताहरुको नाम पनि सार्वजनिक गर्ने विषय विधानमा नै राखिएको हो ।
तर विधान संसोधन पछिका दुई वटा साधरण सभाले पारित गरिएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । सन् २०२१ को जुलाईमा भर्जिनियामा सम्पन्न साधरण सभाको बन्द शत्रमा तत्कालिन कोषाध्यक्षले मौखिक बाचन गरेको प्रतिवेदन पछि इमेलमा पठाउने भनिएको थियो । बन्द शत्र सकिए पछि प्राप्त इमेलमा केही कार्यक्रमको आम्दानी नै छुटाइएको पाइयो ।
तत्कालिन कार्यवहाक अध्यक्ष बिकासराज न्यौपाने अहिले अध्यक्ष छन् । यस्तै तत्कालिन कोषाध्यक्ष मच्छेदेवी गुरुङ अहिले उपाध्यक्ष छिन् । ‘न्यूयोर्कमा पत्रकारहरु मात्र सहभागि कार्यक्रममा उठाइएको चन्दा त कोषाध्यक्षको रिपोर्टमा छुटेको छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला ?’ यही आशंका चिर्न पंतिकारले तीन पटक सम्म नेजा कार्यसमितिमा पत्रचार गरे पछि हालका कोषाध्यक्ष प्रभात भट्टराईले दिएको जवाफ हो ।
(भट्टराईको पुरा जवाफ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला )
भट्टराई आफै नेपालमा कहलिएका आर्थिक पत्रकार हुन् । आर्थिक मामलामा उनी दख्खल राख्छन् । ऐन नियमका बारेमा उनले थुप्रै पटक जोडदार कलम चलाएका छन् तर विडम्वना पारर्शिताको पक्षमा दशकौं कलम चलाएका भट्टराई आफैले कार्यन्वयन गर्ने ठाँउमा भने लाचारी देखिएका छन् ।
विधानले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भनेको छ । सदस्यले मागेमा उपलब्ध गराउनु भनेको छ । तर उनले पठाएको जवाफि पत्रमा यस्तो भनिएको छ ।
‘नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ(नेजा)को सातौं अधिवेशन तथा १४ औं साधारणसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक (कोषाध्यक्ष) प्रतिवेदनलाई थप प्रष्ट पार्नका लागि प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित आम्दानी तथा खर्चका रिसिप्टहरु समेत समावेश गरी पठाएका छौं । यस बाहेक अन्य थप केही विषय रहेमा हामीले आउँदो साधारणसभामा समेत छलफल गर्न सकिने सबै सदस्यहरुमा जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
आम्दानी खर्चमा अनियमितता भयो भन्ने विवाद आएमा साधरण सभामा छलफल हुने हो तर यहाँ साधरण सभाले पारित गरिसकेको रिपोटको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न माग गरिएको हो । जुन कुरा विधानमा लेखिएको छ त्यसलाई स्मरण गराइएको हो । कम्तिमा चन्दादाताले थाहा पाउन उनीहरुले गरेको सहयोग नेजाको कोषमा चढेको छ कि छैन भन्ने । किनकी टेक्सासमा भएका कार्यक्रममा नेजाको लेटरहेडमा ठूलो रकममा चन्दा उठाएर त्यो आम्दानीमा समेट्न छुटाइएको र कतिपय नक्कली बील बनाएर भुक्तानी दिइएको आशंका गरिएको छ । नेजा नेतृत्वले पूर्ण रिपोर्ट तीन बर्ष देखि लुकाउदा त्यो आशंकामा बल पुगेको छ ।
तत्कालिन कोषाध्यक्ष गुरुङले मौखिक रुपमा बाचन गरिएको प्रतिवेदनमा सबै भन्दा ठूलो आम्दानी र खर्च सन् २०१८ मा टेक्सासमा भएको साधरण सभामा देखाइएको छ । २७ हजार ६ सय ५५ डलर आम्दानी र २० हजार नौ सय १४ डलर खर्च भएको भनिएको छ । तर आम्दानी के कसरी र को को बाट भयो र खर्च कहाँ कसरी भयो भन्ने खुलाईएको छैन । उठाइएको सबै रकम नेजाको खातामा जम्मा भयो ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।
यसै गरि गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको निर्वाचनमा गरिएको प्रेसिडेन्सियल डिवेटको खर्च पनि गोप्य राखिएको छ । एनआरएनए डिवेटमा नेजाको नाममा उमेदवार सँग व्यक्तिविच्छे चन्दा उठाइएको बारे तत्कालिन कार्यसमितिमा ठूलो विवादको विषय भएको बताइएको थियो । कार्यसमितिका पदाधिकारी बीचमा आपसमा आरोप प्रत्यारोप हुदाँ चन्दादातालाई स्पष्टिकरण सोध्ने देखि तत्कालिन अध्यक्षले राजिनामा दिने सम्मका प्रकरण आएका थिए ।
एउटा चन्दादातालाई तपाईले नेजालाई आर्थिक सहयोग गर्नु भएको हो कि होइन भनेर सोध्दै संस्थालाई तज्तित बनाउने काम गरिएको थियो ।
पत्रकार र पत्रकारको संस्थाले जथाभावि र गोप्यरुपमा चन्दा लिन हुदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर नेजाको नाममा झण्डै ५० हजार डलर उठाउदा चन्दादाताको नाम गोप्य राखिएको छ । यस्तै खर्च पनि कुन कार्यविधिबाट गरिएको हो खुलाइएको छैन् ।
एक हजार भन्दा बढी खर्चर बनाइएको वेवसाइड अपडेट छैन । नेजाको आधिकारिक फेसबुक पेज पनि वर्तमान कार्यसमितिले लथालिङ्ग छोडेको छ ।
नेजाका महासचिव सुरज भण्डारी फोन र म्यासेज मार्फत पटक पटकको प्रयासमा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कोषाध्यक्ष भट्टराईले आफुले प्राप्त विवरण पठाएको त्यो भन्दा बढी आफु जिम्मेवार नहुने भन्दै गैरजिम्मेवार बने । पत्रकारको रुपमा आफुले अरु संस्थामा पारदर्शिता खोज्ने तर आफु पदमा भएको संस्थाको हिसाव लुकाउने नेतृत्वको शैलीलाई उनले तोड्न सकेनन ।
अध्यक्ष न्यौपानेले पुरानै रेडिमेट उत्तर दिएर पन्छिए । ‘मैले एक पेनी पनि चलाएको छैन सबै हिसाव स्पस्ट छ ।’ त्यसो हो भने हिसाव सार्वजनिक गर्न किन अप्ठेरो भन्ने प्रश्नमा न्यौपानेले त्यो काम कोषाध्यक्षको भएको बताए । ‘सबै काम अध्यक्षले नै गर्ने हो भने महासचिव र कोषाध्यक्ष किन चाहियो ?’
तर कोषाध्यक्ष भट्टराई अध्यक्ष न्यौपानेले अनुमति दिएको जति सबै कुरा आफुले महासचिवलाई पठाउन भनेको दावी गर्छन् ।
नेजाका संस्थापक अध्यक्ष, सल्हाकार एवं विधान समितिका संयोजक गिरिश पोखरेलले संस्था विधान अनुसार चल्नु पर्ने तर वर्तमान अवस्थाको बारेमा आफ्नो कुनै टिप्पणि नरहने बताए ।
नेजाका सदस्य लेखनाथ गौतम विधान सबैले मान्नु पर्ने अझ आर्थिक विषयमा कुरा उठे पछि जवाफ दिनु पर्ने धारणा राख्छन् ।
“संस्थाका हिसाब किताबहरु पारदर्शी तरिकाले बिधान अनुसार सार्बजनिक गर्नु कार्यसमितिको प्रमुख दायित्व हो । व्यक्तिगत रुपमा कसैको आर्थिक क्रियाकलापमा दोष लगाउने ठाउँ नभए पनि आम्दानी र खर्च दुरुस्त नराख्दा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ।’
गौतम अगाडि भन्छन्,’ अझ पत्रकारहरु जो आफैले अरुका आर्थिक गतिविधिमा प्रश्न उठाउने गर्छन, उनीहरुले त झन आफ्नो संस्थामा उदाहरणिय काम गरेर अरुलाई देखाउन जरुरी हुन्छ। यसमा नेजाले केहि अस्पस्ट कुराहरु रहेको कुरा उठाइएको छ भने त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।’
नेजाको वर्तमान नेतृत्वको अपरिपक्कताका बारेमा पंतिकारले यस अगाडि पनि प्रश्न उठाएको थियो । पत्रकारको संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति नेजा अध्यक्ष न्यौपानेले संस्थाको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो फेसबुकमा ब्लक गरेर व्यक्तिगत गालिगलौज र धम्कीमा उत्रिएका थिए ।
‘म आफै सफल व्यापारी हुँ, मैले संस्थाको पैसा चलाएको छैन, प्रमाणित भएमा म एक छिन पनि पदमा बस्दिन ।’ न्यौपानेले पटक पटक दोहोर्याएको प्रतिवद्ता हो यो । तर उनैको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमितिले पारित गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा आम्दानी लुकाइएको कार्य समितिकै माइन्युटमा प्रष्ट भएको छ ।
पत्रकारहरु मात्र उपस्थित कार्यक्रममा त आम्दानी लुकाइयो भने उनको आफ्नै गृहराज्यमा हजारौको कारोवार गर्दा के भयो होला ? तर न्यौपाने कुनै जिम्म्वारी लिने पक्षमा देखिदैनन ।
बिकासराज न्यौपाने सफल व्यापारी हुन उनी सँग टन्न पैसा छ त्यसकारण उनीमाथि शंका गर्नु पर्दैन भनेर मात्र पत्याइदिनु पर्ने हो ?
सबै कुरा ठिकठाक छ भने तीन वर्ष देखि किन आम्दानी खर्च हिसाब सार्वजनिक गरिएको छैन ? एक पेनी पनि हिनामिना भयो भने पदमा बस्दिन भन्नेले आम्दानी नै लुकाउनुलाई के भन्ने ?
चोरी पत्ता लगाए पछि चोरीको सामान फिर्ता दिएर म इमान्दार हुँ मैले फिर्ता गरे पछि चोर भन्न मिल्छ भने जस्तै भएन ।
पत्रकारको संस्था आफै पारदर्शि हुनु पर्दैन ? लाखौं डलरको हर हिसाव कागजको खेस्रालाई बील मानेर हुन्छ ? अरुलाई विधान मानेन भनेर समाचार बनाउने पत्रकारहरु आफैले विधान मान्नु पर्दैन ? नत्र नक्कली कागजको खेस्राले लाज ढाकिएला ?
अमेरिकामा नेपाली पत्रकारको संस्था : आम्दानी लुकाइयो, खर्चमा मनपरी
एनआरएनए प्रमुख संरक्षक घलेद्वारा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, निर्वाचन समिति पुनर्गठन युक्रेनमा नेटो र रुसको प्रत्यक्ष द्वन्द्वको अर्थ तेस्रो विश्वयुुद्ध हो : बाइडेन